Madaxweyne Xasan oo sheegay in Sheikh Xasan Daahir eedeymo caalami iyo Mid Soomaaliya loo haysto – idalenews.com
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii u horeysay ka hadlay xariga Xasan Dahir Aweys, isagoo cadeeyay in Sheekha eedeymo looga heysto Soomaaliya iyo Caalamka.
Wareysi gaar ah oo uu siiyay Telefishinka Universal TV ayuu sheegay in Xasan Dahir uu yahay nin la garanayo oo dagaaladii dalka ka dhacay qeybo badan uga soo jiray.
“Xasan dahir waa nin la garanayo, nin hogaamiye ah muddo dhan dagaaladii dalkan ka dhacay qeybo badan uga soo jiray, Soomaalida iyo meelo badanaa eedeymo looga heysto”ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.
Madaxweynaha ayaa sheegay in Xasan Dahir laga wareysanayo howshii uu ku soo jiray, isla markaana dowladda ay gacanta ku heyso
“Howshii uu ku soo jiray Sheekh Xasan ayaa laga wareysanaya, wali waa dambiile, maxkamada la geynaya ee waa la dilaya midna ma jirto , dacwooyin caalami ah iyo liisas uu ku jiro waa jiraan”ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in hada liisaska uu ku jiro ay wax ka rakibmayaan, isla markaana mas’uuliyadiisa ay saaran tahay dowladda Soomaaliya, isla markaana dhulkeeda uu joogo sida uu yiri
“Sheekh Xasan wali wareysi u socdo, ciidamada amniga wareysanaya iyo Hey’adaha cadaalada ayaa wareysanaya”ayuu yiri.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa hadalkiisa ka duwan hadaladii horay uga soo baxay Ra’iisul Wasaaraha iyo Wasiirka Arrimaha gudaha oo si caadi ah uga hadlayay xaalada Sheekh Xasan Dahir Aweys.
Todobaadkii hore ayay aheyd markii ciidamada gaarka ah ee Nabadsugida qaranka ay gacanta ku dhigeen Sheekh Xasan Dahir, markii laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha Muqdisho xilli habeen ah, ayna ergooyin beeshiisa ka socda ka keeneen degmada Cadaado oo dhamaadkii bishii hore u baxsaday.